Ngwa iji bipụta na blog gị na Mac | Esi m mac
Ọtụtụ n'ime ndị na-agụ anyị n'oge a nwere blog nke gị na WordPress ma ọ bụ rụkọta na mbipụta dị iche iche. Ma kwa ụnụ niile (ana m etinyekwa onwe m), anyị na-edekarị post anyị site na ihe nchọgharị nke Mac. Agbanyeghị, site na oge na ịba ụba nke ngwa, enwere ngwa dị iche iche na-atọ ụtọ nke anyị kwere, site na otu ebe, nwee uzo blọọgụ niile nke anyi ji ede ihe.
Nke a bụ uru dị ukwuu nke ngwa ndị a iji bipụta na WordPress, ohere pụrụ iche na blọọgụ gị niile, ma ndị nke gị ma ndị nke gị na ha na-emekọ ihe ọnụ, nke na-enye nkasi obi na nkasi obi ka ukwuu, na mgbakwunye na iri obere akụrụngwa karịa Safari ma ọ bụ ọzọ nchọgharị. Mana na mgbakwunye, enwere ọtụtụ mgbakwunye ndị ọzọ ị na-enweghị site na ihe nchọgharị ahụ.
1 Melite ahụmịhe nke ikenye na blog gị na ngwa ndị a
Melite ahụmịhe nke ikenye na blog gị na ngwa ndị a
Ọ bụrụ na ị dee na otu blog, ime ya site na Safari ma ọ bụ ihe nchọgharị ọzọ na Mac gị nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ; ma mgbe onyinye gị na-abawanye, ihe na-agbagwoju anya ebe ọ bụla ị gbanwere blog ị ga-enweta ya. Nwere ike izere nke a na nke ọ bụla n'ime ngwa abụọ m ga-egosi gị n'okpuru, nke, na mgbakwunye, na-enye gị ntanetị dị ọcha, dị mma ma na-enweghị nghọta, ha na-emezigharị n'ụzọ zuru oke nha nke ihuenyo Mac gị (ma ọ bụ nha ịchọrọ) ma nwee atụmatụ na-atọ ọtụtụ n'ime gị ụtọ dịka ibubata PDF ma ọ bụ akwụkwọ Okwu, ide ihe na-enweghị mgbagha, Markdown, mbipụta ndabere, mmekọrịta na ngwaọrụ iPhone na iPad gị, ntinye ngwa ngwa nke njikọ na onyonyo, ịnweta ọnụọgụ ọnụ ọgụgụ gị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Aga m ebido official WordPress ngwa maka Mac. Ọ nọghị na anyị ruo ogologo oge, sonso otu afọ, ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma (na-enweghị nsogbu na anyị na-mgbe ụfọdụ ịhụ na ya iOS version). Ọ bụ kpam kpam free ọ na-enye anyị ohere ịnweta blọọgụ niile anyị na-esonye, ​​ma ọ bụ na wordpress.com ma ọ bụ jiri nnabata anyị.
Ngwa ngwa desktọọpụ WordPress.com na-agbanwe maka nha ọ bụla. Youchọrọ obere windo n'akụkụ iji lelee ọkwa ma ọ bụ na ị masịrị ịnweta windo ihuenyo zuru oke maka ahụmịhe ederede zen? Choose na-ahọrọ.
Igodo ọzọ na ngwa WordPress maka Mac bụ ọsọ ya ebe ọ bụ na, dị ka akọwara na weebụsaịtị ya, ọ »na-achịkọta saịtị ahụ niile n'ime otu mpaghara. Peeji na-ebu ihe n'otu ntabi na na-eche na-ebelata. »
M na-adụ gị ọdụ tupu ị nwaa ngwa ọ bụla ọzọ, ọkachasị ndị akwụ ụgwọ, gbalịa ngwa WordPress maka Mac ị nwere ike budata n'efu ebe a.
Kwuo banyere Ulysses maka Mac bụ isi okwu. Bụ ngwa nke ndi okacha mara nma choro na arụmọrụ dị egwu na ọtụtụ ọrụ na atụmatụ ndị na-eduga ndị ọkachamara dị ka David Hewson, onye edemede, ịkọwapụta na "Ngwa ahụ dị ịtụnanya. Iji ya eme ihe na-ato uto. Ezigbo ọrụ ", mgbe magazin a ma ama MacWord kwuru na" O siri ike icheta ahụmịhe onye ọrụ ka mma na ikpo okwu ọ bụla. "
Ulysses bụ ebe zuru ezu maka ide ihe na OS X. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọdee akwụkwọ, onye nta akụkọ, nwata akwụkwọ ma ọ bụ onye na - ede blọgụ: ọ bụrụ n ’ịchọrọ ide, ma dee ọtụtụ ihe, Ulysses na - enye gị otu ngwaọrụ kachasị mma nke na - ekpuchi ọ bụla nke usoro ide
Ulysses na-enye enweghị njedebe nke ọrụ gụnyere interface dị ọcha, enweghị ndọpụ uche, nchịkọta akụkọ ederede na njirimara akara, ederede ederede (mkpụrụedemede, okwu, ibe, wdg), Nkwado Split View, nnweta zuru oke na VoiceOver, akara ngosi dị mfe iji mepụta aha, ndepụta, nkọwa, amaokwu, mkpa amaokwu ndị ọzọ na ndị ọzọ, ntinye dị mfe nke njikọ, nkọwa na nkọwa ala ala, ntinye ihe oyiyi site na ịdọrọ faịlụ ahụ, nnomi na ịde ihe mara mma, ịlele nsụgharị na ụtọ asụsụ, mmezi akpaka na akwụkwọ ọkọwa okwu mbubata faịlụ DOCX, Markdown na ederede, na-edezi faịlụ ederede site na folda ndị ọzọ. , akpaka na ndokwa nkwado ndabere na mpaghara, mbupụ na PDF, DOCX, RTF, TXT, Markdown, HTML na ePub, na-ebipụta na WordPress na Ọkara na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụghị naanị ha bụ ngwa maka ndị edemede na ndị na - ede blọgụ, mana nke ahụ ga - enweta akụkụ nke abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Ngwa na-ebipụta na gị blog si Mac
Ugbu a, enwere MacBook Pro ọhụrụ na-enweghị Touch Bar na Spain